Afee Noloshaada! Sayid Maxamed Cumar “Darwiishka” | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Afee Noloshaada! Sayid Maxamed Cumar “Darwiishka”
August 12, 2017 | Published by: daar
Waxa uu ahaa nin aad u karti badan. Ma daale, ma xiiqe iyo ma naste dharaar iyo habeen surwaalka gaabsada ayuu ahaa. Hawlkarnimadiisa ka sokow waxa uu ahaa nin aad u gacan fudud misana shaqadiisa daqiiqado kaga soo baxa. Biyo uma kabban waligiiba hawl uu uu gacan u qaadey. Hooyadii ayaa nin dhashay ayaan runtii la odhan karaa. Ninkan odeyga ahi waxa uu can ku ahaa, garaacista/goynta dhirta waaweyn. Isaga iyo faashkiisa afka badan dhirtaa ka cabaadi jirtey. Kaymaha lama galaanka ah ayaa uu sida uu faash ugu wado dhanka kale uga taallabi jirey, dhamas iyi dhebi toonina daqiiqad kuma ay qaadan jirin. Shaqadiisa ugu badan ee uu qabtaa waxa ay ahayd gumaadka iyo garaacista dhirta waaweyn oo uu ku lacag qaadan jirey goyntooda.
Hadda ba maalin maalmaha ka mid ah, ayaa waxa uu shaqaale u noqday nin ganacsade ah. Waxaa na loo diray dhul kayn ah oo la rabo in beer laga dhigo. Waxa na loogu direy si uu u banneeyo oo uu dhirta badan uga dhammeeyo una gooyo. Ninkii ganacsadaha ahaana waxa uu u balan-qaaday in uu siin doono lacag aad u badan haddii uu hawsha si fiican uga soo baxo.
Ninkii hawshii waa uu gudo galay oo faashkiisii weynaa ee afka badnaa ayaa uu soo qaatay. Lacag la aragyaaba nafsad la arag. Maalintii koobaad waxa uu gunta ka xaabiyay oo uu dhulka soo dhigay 18 geed oo damal ah. Ninkii ganacsadaha ahaa kolkii uu arkay hal-addeyga iyo hawl-karnimada ninkan, waa uu u hambalyeeyay, waxaa na uu ku ammaanay kartidiisa shaqo.
Maalintii saddexaad, hadalladii dhiirrigalinta ahaa ee ganacsadahu yidhi awgeed, ninkii hawsha dadaalkeedii waa uu sii laban-laabay, saddex laabey oo afar laabey, bal se maadama uu shalay hawl aad u culus qabtey waa uu daaley illeyn waa nafley e, isla jeerkaasna waxa uu jaray 15 geed oo kaliya. Maalintii saddexaad na waxa uu jaray 10 geed. Xagga uu maalintii afaraad uu ka jarey lix geed oo qudhiyaata. Maalinba maalinba ka danbeysa ninkii waa ka sii yareynayay tiradii hore, illaa uu ugu danbeyntii ka gaadhay in uu maalintii jaro hal geed oo kali ah, waliba dilqi ah!
Ninkii oo la yaabban xagga uu qabtay xooggii iyo kartii uu lahaa ayaa u tagay ninkii ganacsadaha ahaa si u bal arrinkan ugu sheego!
“Xillima ayaa ugu danbeysay wakhti aad aafeyso faashkaaga?” Ayaa uu ganacsadiihii ninkii wayddiiyay. Waxaanu ku jawaabey, “Mudane, ma aanan haynin wakhti aan ku afeeyo faashkayga, waayo dheh, waxa aan mashquul ku ahaa in aan gooyo dhir badan oo qudhiyaata!”
Haddaba, waa tab taas oo kale nolosheennu. Waayo waxa aynnu had iyo jeer wakhti badan ku lumminnaa wax aynaan siinin wakhti aynnu ku afeynno si ay inoogu hawl yaraadaan. Maanta adduunku waxa uu u muuqdaa in qof walbaaba ka mashquul badan yahay sidiisii hore, laakiin se haddana u ka farxad yar yahay marba marba ka danbeysa!
Maxaa ay ku dhacday sidaasi? Haa, dabcan waxa aynnu illownay in aynnu afeynno nafaheenna si aynnu nolol macaan ugu noolaanno. Qalad ma aha in aynnu hawlo badan qabanno oo aynu aad u dadaalno, laakiin se shaqo un ma aha in aynnu goor iyo ayaan u gucleyno, oo aynnu kaga mashquulno waxyaabahii nolosheenna muhiimka u ahaa, sida ehelkeenna, qoyskeenna, asxaabteenna iyo Alle cibaadadii uu inagu lahaa. Waa in aynnu wakhti siinno una helnaa nafteenna si aynnu wax u baranno, u akhrinno waxna u ogaanno.
Waxaynu u baahannahay in aynnu helno wakhti si aynnu nafaheenna ugu raaxaynno, u fikirno, u korno una kobocno. Nasasho jidhka iyo caqliga ba ah waa lagama maarmaan in aynnu helno. Haddaba, haddii aynnu intaasba wayno waxa aynu noqonaynaa faash afbeelay oo la afeyn waayay waxbana aan jarahaynin! Khalaas. Afee noolashaada.